Global Voices teny Malagasy » Ny ao amin’ny tontolon’ny bilaogy Japoney · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Mey 2019 3:52 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Hevitra, Mediam-bahoaka
Namokatra bilaogy momba ny sakafo  tamin'ny zava-niainany ilay Japoney mpaka sary fanao an-gazety, Hiroshi Okamoto , izay nandeha namita asa tany Iraka tamin'ny taona 2004 ary nandany iray volana tany Samawa. Na dia nilaza aza i Okamoto fa manantena ny hampiditra nahandro Irakiana ho an'ireo mpamaky azy, dia manome topi-maso tsy fahita firy momba ny fiainana ao amin'ny toerana Tafi-piarovan-tena Japoney ao Iraka ihany koa izy.
Mba misy Japoney iray aloha farafahakeliny no mibilaogy momba an'i Tanzania. Ninablog  manoratra ny fiainan'i Lulu, mpianatra manana diplaoma izay miala sasatra satria mandany herintaona any Tanzania mianatra teny Swahili. Tsy tena anarany ny hoe “Lulu”, izay midika hoe “perla” amin'ny teny swahili, saingy mihevitra izy fa mora kokoa ho an'ireo tsy mpiteny Japoney ny mahatadidy sy manonona ny anaram-bosotra.
Shanghai Kuma  (ao amin'ny fitaovana fibilaogina So-Net an'i Sony) mibilaogy momba ny efa-taona nipetrahany tany Shina. Mahatonga ny bilaoginy ho mahasarika vakiana kokoa ny fomba fanoratra mahafinaritra ataon'i Shanghai Kuma, miaraka amin'ny fampiasany ny emoticone Japoney mampihomehy .
Na dia tsy tena ampahany amin'ny Onja Anti-Koreana aza, miresaka momba ny “habetsaky ny zavatra tsy mampino” mety hitan'ny olona mandritra ny fiainana andavanandro any Korea ny bilaogy malaza Now's the time…to deflate Korea . Natao ho an “ireo izay tia an'i Korea, ireo izay tsy tia an'i Korea … ary ireo manaraka ny onja Koreana”, mamaritra ny fiainan'i “Christopher,” izay mampianatra teny Japoney any Séoul ny bilaogy.
Amin'ny lafiny maro, mitovy amin'ny nataon'ireo mpampianatra Anglisy vahiny any Japana  ny fandinihan'i Christopher. Na dia izany aza, mifanohy sy mandaitra i Christopher, ary mitady ho tsy ampy vitriol (asidra solifara mahery) izay hita matetika ao amin'ny bilaogy Japoney maro be momba an'i Korea ny lahatsorany. Na dia izany aza, mazoto mikaroka sy mandrisika izay heveriny fa toetra nasionaly Koreana i Christopher. Tamin'ny lahatsoratra vao haingana , niresaka izay heverin'ny Japoney ho faharazan'ny Koreana maka tahaka sy milalao vokatra sy hevitra Japoney izy. Na ratsy kokoa aza, nilaza i Christopher fa, ireo vokatra “nangalarina” ireo dia lazaina fa Koreana “orizinaly”.
Tranga iray, araka ny filazan'i Christopher, ny lalao an-tserasera iray novokarina tany Korea antsoina hoe “Crazy Racing Cart Rider” izay mazava tsara fa hala tahaka tamin'ny Super Mario Cart an'ny Nintendo. Fanandramana zavatra ho avy ao amin'ny fiarahamonina mihamitombo , angamba.
The Mainichi Daily News mitatitra fa  “lisitra voalohany amin'ny zavatra ankafizin'ny mpanjifa any Japana ny bilaogy”.
Misy fiantraikany amin'ny fibilaogina ao amin'izany firenena izany ny lalànan'ny fifidianana Japoney ‘efa lany andro ela’ :
(Takafumi Horie, who's a candidate in the September 11 election) has stopped updating his popular Internet blog  — which was registering over 50,000 hits a day — since Aug. 18, the day before he announced his candidacy.
Livedoor , his Internet services company, has also stopped carrying news stories on its Web portal site that mention specific election candidates, spokesman Kazuyoshi Omura said. The site plans to run an election special as soon as the elections are over.
Nijanona nanavao ny bilaoginy malaza amin'ny aterineto  i (Takafumi Horie, izay kandidà amin'ny fifidianana 11 septambra) – bilaogy izay nahitana fisoratana anarana mihoatra ny 50.000 isan'andro – nanomboka ny 18 aogositra, andro talohan'ny nanambarany ny firotsahany hofidiana.
Nijanona namoaka fampahalalam-baovao ao amin'ny vavahadin-tseraserany izay milaza momba ireo kandidà manokana amin'ny fifidianana ny Livedoor , orinasany momba ny tolotra aterineto, hoy i Kazuyoshi Omura, mpitondra teny. Mikasa hikarakara fifidianana manokana ny tranonkala raha vao vita ny fifidianana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/05/23/138887/
 bilaogy momba ny sakafo: http://ameblo.jp/iraq/
 Hiroshi Okamoto: http://okamoto-online.com/
 Shanghai Kuma: http://blog.so-net.ne.jp/shanghaikuma/
 fibilaogina So-Net : http://blog.so-net.ne.jp/
 emoticone Japoney mampihomehy: http://club.pep.ne.jp/~hiroette/en/facemarks/
 kafe misy ronono : http://www.ne.jp/asahi/aocky/kite/coffee/mcoffee.jpg
 Onja Anti-Koreana : http://cyber.law.harvard.edu/globalvoices/2005/07/29/inside-the-japanese-blogosphere-the-anti-korea-wave/
 Now's the time…to deflate Korea: http://christopher2005kor.seesaa.net/
 mpampianatra Anglisy vahiny any Japana: http://www.fuckedgaijin.com/forum/viewforum.php?f=4
 lahatsoratra vao haingana: http://christopher2005kor.seesaa.net/article/6261018.html
 fiarahamonina mihamitombo: http://www.speroforum.com/site/article.asp?id=1422
 mitatitra fa: http://mdn.mainichi-msn.co.jp/entertainment/news/20050811p2a00m0et015000c.html
 lalànan'ny fifidianana Japoney ‘efa lany andro ela’: http://mdn.mainichi-msn.co.jp/national/news/20050831p2a00m0na026000c.html
 his popular Internet blog: http://blog.livedoor.jp/takapon_ceo/